Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL01
Isitshalo esilula esihle esiklanyelwe ukukhulisa izibani sizonakekela ngokukhethekile izitshalo zakho ozithandayo, amalambu akhula ngaphezulu nesibambi ngezansi sokubamba. Iphinde ifake imifino yakho ibe yisithombe esihle ongayithokozela kangcono. Ungayibeka noma kuphi lapho uthanda khona, lawo amaphuzu osizo lwezibani ezikhulayo.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL02
Le modeli yenzelwe labo abafuna ukunakekela ikakhulukazi izitshalo zakhe noma benze ingane ibone izitshalo zikhula. Imibala emithathu emihle ongayikhetha, futhi isiza ukufunda ebumnyameni ngamalambu ekhanda ama-degree angama-360 degrees.
Ukutshala Kwezitshalo / PGL03
Ngomklamo wemvelo woqalo yemodeli le modeli ibonakala ilula futhi inhle. I-spectrum ephelele iqinisekisa ukuthi isitshalo sakho singakhula kahle njengokukhula ngaphansi kwelanga futhi izitshalo zakho ozithandayo zihlala eceleni kwakho imini nobusuku endlini. Futhi le modeli awukwazi ukufaka izicelo zezitshalo kuphela, futhi ungenzela nezinhlanzi zakho, kungaba umhlobiso omuhle.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL04
Uzothanda lesi sitshalo semodeli sikhulisa izibani, kungukuklanywa okuhle okuhle futhi okunemisebenzi eminingi, isidlali somculo wenkanyiso, ama-ion akhipha isihlanza somoya ne-humidifier. Kungukukhetha okuhle kwezitshalo zakho nokuhlobisa ikhaya.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL05
Izibani ezikhula ngomhlabathi, akukho mkhawulo wesizini noma umkhawulo wesimo sezulu. Ungaba nengadi yakho ngaphakathi, imifino yesaladi entsha, yezimbali noma yezitshalo ozithandayo. Inamalambu e-auto / i-auto pump / i-alamu yevolumu yamanzi / i-alamu yevolumu yezakhi zokutshala kwakho okulula kanye nama-50,000hrs esikhathi sokuphila.
Ukubuka nje, kungumhlobiso omuhle wekhishi lakho noma igumbi lokuhlala. Isebenza ukukusiza ukuthi utshale imifino / izimbali / izitshalo zakho ngokunempilo ngama-50,000hrs esaphila. Ukusiza ukufunda kwakho ebumnyameni ngemifino oyithandayo eceleni kwakho. Yibeke noma yikuphi lapho uthanda khona, kunokukhanya kwelanga okulingisa okugcwele.
Yisixazululo esiyingqayizivele sokukhanyisa ingadi yasekhaya. Izibani ze-LED ezikhulayo zilingisa ukukhanya kwelanga, zikhuthaza izitshalo i-photosynthesis kunoma yisiphi isimo sezulu. Ukukhanya kwemvelo okufudumele kusifanele kakhulu isitshalo esisendlini futhi kuyasijabulisa impela. Yisistimu ekhula ngamanzi i-hydrogen, ehlanzekile kunokukhula enhlabathini. Yenzelwe uhlelo lokujikeleza kwamanzi, okwandisa umoya-mpilo emanzini. Umsoco omningi kunenhlabathi, futhi ukhule ngokushesha. Kuphelele phezu kwesimo sezulu unyaka wonke, futhi izitshalo zakho zingakhula kangcono futhi zisheshe. Kungaba yisipho sokufundisa izingane, sizisize zibheke inqubo yokukhula. Abazali nogogo nomkhulu bazothanda nemifino emisha yonyaka wonke.
Ukutshala Kwezitshalo / PGL07
Idizayini elula yesimanje yenza itholakale noma ikuphi ukubeka. It’kulula ukusebenzisana nayo, amalambu we-auto, ipompo ezenzakalelayo, amasethingi wesikhathi ahlukile wokukhetha kwakho. Ungayithokozela ngokugcwele injabulo yezitshalo zokukhulisa.
Ukutshala Kwezitshalo / PGL08
Le modeli ungakhula izitshalo eziyi-12, it’s ngezibani ezizenzakalelayo ku-off / auto pump pump / fan ohlakaniphile wokutshala kwakho okulula. Ungaguqula ukuphakama ukulingana izitshalo nezitshalo ezahlukahlukene’ isikhathi esihlukile. Futhi ngomklamo wayo ohlanzekile omuhle uzojabulela ukuhlelwa kwanoma yiziphi izitshalo, i-basil, i-thyme, i-sage, iparsley, i-cilantro, i-cherry tomato, i-rosemary, upelepele, izimbali kanye ne-strawberry njll.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL09
Ngale modeli enkulu ungatshala izitshalo eziyi-14. Izindlela ezintathu zokutshala izitshalo, ipompo ezenzakalelayo, ithangi elikhulu lamanzi, isibuko esigcwele, amalambu ashintshekayo, ukunakekela izitshalo zakho ngokugcwele. Futhi unokukhetha okuningi kombala ngokuthanda kwakho. It’ukukhetha okuhle ngengadi yasendlini ye-hydroponic.
Isitshalo Sikhule Ukukhanya / PGL10
Isitshalo esilula esihlanzekile esiklanyelwe ukukhulisa amalambu alingana nesitshalo esisodwa, inhlabathi ne-hydroponic. Izibani ezizenzakalelayo zivaliwe ukuze isitshalo sakho sikhule. Tshala isitshalo sakho osithandayo bese usibeka noma kuphi lapho uthanda khona. Ukukhanya kungasiza ukufunda ebumnyameni, ungakujabulela kangcono ukufundwa nesitshalo sakho osithandayo eceleni kwakho.
Le modeli ungakhula izitshalo ezi-4. I-spectrum ephelele nezindlela ezi-3 zinakekela ngokukhethekile izitshalo zakho futhi zikwenze ukujabulele ukuhamba. Izibani ezizenzakalelayo ku-off / auto pump / izibani eziguquguqukayo ukuphakama / i-alamu yevolumu yamanzi kusiza ukutshala okulula.
Lesi sibani esilula esenzelwe ukukhulisa izitshalo siyatholakala kwizitshalo eziyi-7, izimbali, imifino noma ezinye izitshalo ozithandayo. Ngomklamo omuhle ungabeka izimbali zakho noma yikuphi ukuhlobisa. Izindlela ezigcwele ze-spectrum / ezi-3 zokukhulisa / amalambu we-auto kuvaliwe / futha ezenzakalelayo / amalambu angahleleka ukuphakama / i-alamu yamanzi, ukutshala okulula kungaba mnandi.
Isitshalo sikhule ukukhanya, Khulisa i-Lightin, Khulisa ukukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya,